DEG DEG: Harry Kane oo aan soo xaadirin Tababarkii maanta ee Kooxdiisa Tottenham xilli la la xiriirinayo Manchester City – Gool FM
DEG DEG: Harry Kane oo aan soo xaadirin Tababarkii maanta ee Kooxdiisa Tottenham xilli la la xiriirinayo Manchester City
Haaruun August 2, 2021
(Manchester) 02 Agoosto 2021. Harry Kane ayaan ka soo muuqan tababarkii Tottenham ee lagu waday inuu saaka ka soo muuqdo kaddib markii uu Weeraryahankan ka soo laabtay fasaxa.
Qorsha iyo ballanta ayaa ahaa in Kane uu maanta maro tijaabada caabuqa Korona Fayras, maadaama uu ka soo laabtay fasaxii xagaaga.
Yeelkeede, Suxufiga Sky Sports ee Paul Gilmour oo ku sugan xerada tababarka kooxda Spurs, ayaa soo warina in Harry uusan kasoo muuqan tababarka Saaka.
Paul Gilmour ayaana yiri: “Harry Kane ayaa lagu waday inuu ku soo laabto tababarka maanta kaddib Euro.
“Waxa jira waxbadan oo ay tahay in Harry Kane la la caddeeyo oo ay ugu horreyso saxmada ka taagan heshiiska uu ku bixi karo, xaqiiqooyinku waa kuwo baaqi sii ah maanta.
“Harry Kane wali waxa uu doonayaa inuu ka tago Tottenham. Tottenham wali waxay doonaysaa inay Weeraryahankan sii haysato, Manchester City-na waxay dooni doontaa inay iibsato isaga.”
“Taasi waxay noqon doontaa ajandaha toddobaadkan, waa inay qabataa, waana inay wax ka qabataa bishaan.
“Tottenham waxay hoosta ka xariiqi doontaa qandaraaska dheer ee Kane – taasi miyuu niyad jabinayaa Man City? Miyay taasi meesha ka saari doontaa Man City? Miyay imaan doontaa meel heshiiskan kaliya aan la samayn karin.?”
Si kastaba ha noqotee, 28-sano jirkaan ayaa u muuqda mid Spurs ku qasbaya in laga iibiyo Manchester City, maadaamaa Madaxweynaha Kooxda ee Daniel Levy uusan si sahlan bixitaan ugu ogolaan doonin Kane.
Kooxda Man United oo kalsooni ku qabta inay Chelsea ku garaaci doonto saxiixa Erling Haaland